वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका भाई र ज्वाईको नियुक्ति…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
सुनसरी : वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रति’ष्ठान धरानमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका भतिज र ज्वाइँ नियुक्त भएका छन् ।
वीपी प्रतिष्ठान धरानमा ढकालका भतिज अमृत ढकाल र ज्वाइँ सुमन पन्त अधिकृतसरहको पदमा नियुक्ति भएका हुन् । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार अमृतको नि’युक्ति जनसम्पर्क अधिकृत र पन्तको नियुक्ति प्रति’ष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका कानूनी सल्लाहकारको रुपमा छ । दुवैजनाले ११ कात्तिकमा नियुक्ति पाएका थिए ।
मन्त्री ढकालको दवा’वमा भतिज र ज्वाइँलाई उपकुलपति गिरीले नियुक्त गरेका हुन् । ढकालको समर्थनपछि डा. गिरीले उपकुलपतिमा नि’युक्त पाएका थिए ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वास्थ्य’मन्त्री ढकाल र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माबीच प्रतिष्पर्धा भएको थियो । कम्यु’निष्ट गढ मानिएको क्षेत्रबाट ढकालले मुस्कि’लले निर्वा’चन जित्दा डा. गिरीले भोट माग्न सघाएका थिए ।
कानुनी सल्लाहकार मात्रै तीनजना वीपी प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका स्वकीय सचिव भुवन खतिवडाका दाजुले पनि नियु’क्ति पाएको स्रोत’ले जनाएको छ ।
ढकालका स्वीकय सचिव भुवन खतिवडाका दाजु चिरञ्जीवी खतिवडाले कानूनी सल्लाहकारको रुपमा जिम्मे’वारी पाएका हुन् । चिरञ्जीवीको नि’युक्ति पनि ढकालकै द’वावमा भएको थियो ।
प्रतिष्ठा’न स्रोतका अनुसार उपकुलपतिका कानुनी सल्लाहकार मात्रै तीनजना भएका छन् । यसअघि शान्तिराम भण्डारी का’नूनी सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त भएका थिए । एकजना कानुनी सल्लाहकार हुनुपर्ने ठाउमा तीनजना नियुक्त भएका हुन् ।
नियमावलीमा उल्लेख नभएका कारण तीनजनासम्मले नियुक्ति पाएका हुन् । प्रति’ष्ठानका रजि’ष्टार डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले तीनजना कानुनी सल्लाहकार भए पनि छुट्टा–छुट्टै स्थानमा रहेको बताए ।
रेग्मीका अनुसार कानुनी सल्लाहकार खतिवडाले सर्वोच्च अ’दालत हेर्नेछन् । भण्डारीले विराटनगर र पन्तले कार्यालयको विषयमा हेर्नेछन् ।
केही दिनअघि ढकाल र पन्तले अधिकृ’तसरह नियु’क्ति पाएको उनले बताए । पन्तको नियुक्ति कानून हेर्ने गरी र ढकालको नियु’क्ति जन’सम्पर्क हेर्नेगरी अधिकृ’तसरहको बताइएको छ ।
Prevबधाई ! वीर गोर्खाली चेलीले बेलायती सेनामा तहल्का मच्चाइन, पहिलो पल्ट रचिन यस्तो किर्तिमान…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
Nextनेता पोख्रेल भन्नुहुन्छ : भ्रष्टाचारीलाई पार्टीले छाड्दैन, भ्रष्टाचारीको मुख्य संरक्षक नै प्रधानमन्त्री ओली हुन्…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
एसइईको मूल्यांकनमा ८० नम्बरभन्दा बढी दिँदा कारण खुलाउनुपर्